Amazon Fire HD 10 nyochaa: ịcha na-ezighị ezi na nkuku egosi a oké ọnụ ndudue - News Ọchịchị
The Amazon Fire HD 10 ọ bụghị ezi mbadamba na-adịghị ndụ ruo ọkọlọtọ setịpụrụ ya ụzọ na Amazon ọzọ ngwaike.
Isiokwu a na-akpọ “Amazon Fire HD 10 nyochaa: ịcha na-ezighị ezi na nkuku egosi a oké ọnụ ndudue” e dere site Samuel Gibbs, maka theguardian.com on Friday 6 November 2015 07.00 UTC
The Fire HD 10 bụ Amazon si ọhụrụ zuru-sized mbadamba, ma ọ he nnọọ ọtụtụ nkuku na bụ ọnụ ala.
Amazon si Fire mbadamba a kụrụ na-agha n'elu afọ anọ gara aga. Ha na-enye ezigbo ihuenyo, ezi uche nkọwa na uko mwekota n'ime Amazon si ilekota fim, TV na-egosi, music, akwụkwọ na ngwa ọdịnala na a ala na-eri na-ebelata fọrọ nke nta niile ọzọ. The Fire HD 10 na-agba mbọ ịnọgide na-emekarị.
Azụ nke mbadamba bụ a kenkowaputa plastic na wereziiri fingerprints na scratches mfe. Foto: Samuel Gibbs maka Guardian
Imewe nke Fire HD 10 bụ nnọọ utilitarian. Kpuchie ke a adụ, kenkowaputa plastic na m jisiri akara sekọnd ole nke na ọ nke igbe, ọ na anya ọnụ ala.
Amazon ka a nnukwu ihe banyere mbadamba ịbụ inogide na ndụ 200 odomo na ụlọ ọrụ ahụ si daharia ule tụnyere ndị iPad Ikuku 2's 30. M ama esịn ya ole na ole ugboro jidesie kapeeti na-enweghị na-agbasa ya, ma ha kpebiri na-agbalị na-ebibi ya. Ọ nke ọma na-etinye ọnụ, ma ahụ bụ ọzọ mgbanwe karịa m gaara atụ anya.
The buttons na ọdụ ụgbọ mmiri niile kwụ n'ahịrị na n'elu ọnu, nke pụtara ma gị aka na-ekpuchi olu buttons na ekweisi n'ọdụ ụgbọ mmiri ma ọ bụ ike bọtịnụ na microUSB n'ọdụ ụgbọ mmiri mgbe ẹkenịmde na-ekiri video.
Na 7.7mm oké ọ bụ ihe ijuanya na mkpa maka ala-ọgwụgwụ mbadamba. Ọ na-nwere dịtụ kọmpat bezels gburugburu 10.1in widescreen, nke na-eme ọ na-eche warara ma ogologo maka a mbadamba. Na 432g ọ bụghị kwa arọ jide maka a 40 nkeji TV show, ma m chọpụtara na m na-achọ ebe iji prop ya elu mgbe na-agbalị rụchaa a 2.5 hour nkiri.
Mee na ozu ndị OK. Ihuenyo bụ nnukwu wetuo niile. Ọ na-10.1in na a 720p mkpebi na ala pixel njupụta nke 149 pikselụ kwa anụ ọhịa ahụ. N'ihi na ha tụnyere kasị mbadamba nwere dịkarịa ala 200ppi. Amazon si aga nnukwu Fire HD, na HD 8.9, nwere a 1080p ihuenyo na 254ppi.
Ihuenyo adịghị nkọ, nke na-eme ederede, oyiyi na foto anya na-erughị crisp. Foto: Samuel Gibbs maka Guardian
Ọ dịghị mkpa nke ukwuu n'ihi na video, nke anya passable, na nkezi agba na ezi ikiri angles, ma ederede, akara ngosi, photos na ndị ọzọ na static ihe anya otú ahụ pixelated.
Ọ bụ karịsịa doro anya mgbe ị na-agbali-agụ akwụkwọ na ya, nke anya dị ka ihe si afọ ise gara aga. Ọ bụ ezie na Amazon si Bookerly typeface enyere - ịmafe helvetica accentuates nsogbu - o siiri m ike na-agụ ruo ogologo oge dị ka ihe odide bụ nnọọ crisp ezu na obere size m ga-ejikarị na-agụ.
The stereo ọkà okwu na n'akụkụ nke mbadamba ndị ijuanya ọma na oké maka mbadamba ọkà okwu. Ka na-adịghị mma iji na-eji dị ka a raara onwe ya nye music ọkpụkpọ, ma ezi nke na-ekiri a video mgbe isi nri.
Ihuenyo: 10.1na (1280 x 800) LCD (149ppi)
Processor: MediaTek quad-isi (1.5GHz sọrọ-isi + 1.2GHz sọrọ-isi)
Nchekwa: 16 ma ọ bụ 32GB; microSD oghere-dịnụ
Igwefoto: 5MP n'azụ igwefoto, 0.3MP n'ihu-eche ihu igwefoto
Akụkụ: 159 x 262 x 7.7mm
Na-adịghị ike ngwaike na-eduga ná ogbenye ahụmahụ
A microSD kaadị oghere bụ otu n'ime ole na ole gbakwunyere isi n'ihi na Fire HD 10, ekwe ka ị na tinye ihe nchekwa mfe. Foto: Samuel Gibbs maka Guardian
The Fire HD 10.1 nwere a quad-isi MediaTek processor na 1GB Ram, nke bụ ruo ọrụ nke powering mbadamba. Ihe ụfọdụ efehe ezi, ma n'ezie launching ha ma ọ bụ ịmafe n'etiti dị iche iche ihe aga-eme e dogged site a lag ogologo oge iji mee ka ị na-eche ma mbadamba ama jiri.
Mgbe mbadamba akpa-amalite ya na-arụ ọrụ ezi. Loading mbụ video si Amazon si Prime ngwa ngwa Video na-arụ ọrụ ezi. Ma, ọ bụ mgbe ị na-amalite Ibu Ibu nke abụọ, ma ọ bụ ịgbanwee gaa na ọzọ ngwa na ihe na-amalite na creak.
Video playback nwere ike ụfọdụ na-eji ire ụtọ, ma ga mgbe uche okpokolo agba na judder. Swiping gafee homescreen nwekwara ike lag merụsịrị, mgbe wụnye ngwa me mbadamba ka a iri ari.
Graphically kpụ ọkụ n'ọnụ egwuregwu dị ka Real Racing 3 ndị fọrọ nke nta unplayable, mgbe ọbụna Ncheta Valley stuttered site n'oge ruo n'oge.
Batrị were gburugburu awa asaa nke video playback. Nnukwu nke maka ndụ batrị bụ na ihuenyo adịghị enwe onye ambient Ìhè ihe mmetụta na-adịghị Ijikwa nchapụta na-akpaghị aka, nke pụtara na ọ bụ mgbe kwa na-egbuke egbuke ma ọ bụ oke dull.
Nchaji were ruo mgbe ebighị ebi. Ọ na-ada awa ise ka n'ụzọ zuru ezu chajịa Fire HD 10. Kasị mbadamba-ana na abụọ ka awa atọ.
Wi-Fi n'ikuku bụkwa ogbenye. Na otu ebe na a Google Nexus 6P ma ọ bụ iPad Ikuku 2 ga-bulie a ike Wi-Fi mgbaàmà, gburugburu 12m si rawụta, na Fire HD 10 ga-ọgụ na mgba. Download gbapụrụ ọsọ nke ngwa ọdịnala na video ndị nwekwara nnọọ ngwa ngwa. The internet njikọ na rawụta abụghị ịmachi akpata.
Fire OS 5 bụ nzọụkwụ n'elu gara aga Amazon sistem. Foto: Samuel Gibbs maka Guardian
The Fire HD 10 abịa na Amazon si ọhụrụ version nke Fire OS 5, nke dabeere ikpeazụ afọ Android 5 Lollipop. A maara ngwa okporo dị na homescreen, ma swiping ekpe nakwa n'aka nri aka idozi ige.
Swiping gafee akwụkwọ, dị ka ọmụmaatụ, egosiputa gị zụrụ akwụkwọ ahụ n'elu, nwere ikwu maka free akwụkwọ ma ọ bụrụ na i nwere Amazon Prime ma ọ bụ Kindle Unlimited wee n'ihu na-atụ aro dabeere na gị zụọ akụkọ ihe mere eme. Otu na-aga n'ihi na video, egwuregwu, ngwa, music, audiobooks, ọdụ akwụkwọ akụkọ na Amazon shopping.
Ekpe kasị ihuenyo na-egosi na nso nso-eji ma ọ bụ na-ele ihe, nke bụ ihe ndị kasị ụzọ nke na-azụ n'ime content.
Ọ na-arụ ọrụ nke ọma, na-eme ka ndị kasị mma nke a na oriri dabeere mbadamba. Ọ bụ nke mbụ mbadamba software m na hụrụ na-arahụ budata n'ofè ọkọlọtọ ngwa okporo ma bụ achọghị ịzụ ihe kasị mma banyere Fire HD 10.
Na ike nke software bụghị ezi dị ka ezi. Swipe ala si n'elu na-ahụ Ịma Ọkwa na ihe anya dị ka a set nke ngwa ngwa toggles maka Wi-Fi, Bluetooth, ihuenyo adiana, adịghị ichegbu na ndị ọzọ. Ma n'ezie kasị bụ nanị ụzọ mkpirisi ntọala meziri, bụghị toggles, nke bụ ihe na-akụda.
Otu Amazon akaụntụ nwere na-aha ka mbadamba, ma multiple onye ọrụ profaịlụ gụnyere ụmụ profaịlụ nwere ike ịbụ na ntọlite, nke dị mma maka ezinụlọ mbadamba.
Fire OS ga-agba ọsọ ọtụtụ Android ngwa, kama ọ bụ naanị nwere ohere Amazon na ngwa ahịa. Ọ nwere na-eto eto nhọrọ nke ngwa, gụnyere ugwo-maka ngwa maka free n'okpuru Amazon si Prime "n'okpuruala" nkwalite, ma ọ bụghị dị ka ọtụtụ dị ka Google Play na ọ dịghị nwere niile ọhụrụ ngwa ọdịnala na egwuregwu.
Ise-megapixel n'azụ igwefoto na n'ihu-eche ihu VGA selfie igwefoto bụ ndị ogbenye. Ha weghara inyoghi inyoghi, dull, blurry oyiyi kọrọ n'ụzọ zuru ezu na.
The lockscreen egosiputa Mgbasaozi gwụla ma ị na-akwụ onye amara £ 10 wepụ 'pụrụ iche na-enye'. Foto: Samuel Gibbs maka Guardian
The 16GB Amazon Fire HD 10 na Mgbasaozi na mkpọchi ihuenyo efu £ 170 na nwa ma ọ na-acha ọcha. The 32GB version efu £ 200, mgbe iwepu Mgbasaozi Akwụ ụgwọ £ 10.
Samsung si yiri 9.7in Galaxy Tab A na-efu £ 179, mgbe karịrị nnọọ 8in Galaxy Tab S2 efu £ 240 si Amazon na 32GB nke nchekwa. Apple si dị ọnụ ala iPad efu £ 219. Tesco si Hudl 2 na-eri £ 99, na ọtụtụ n'ime ikpeazụ afọ elu-ọgwụgwụ mbadamba dị maka gburugburu £ 200.
Ọhụrụ Fire OS 5 nwere ụfọdụ ezi echiche na bụ nzọụkwụ elu si aga nsụgharị nke sistemụ. Amazon anwụ anwụ-hards ga-amasị mwekota nke ụlọ ọrụ ahụ si na fim, TV, akwụkwọ na ndị ọzọ ọrụ.
Ma 10in ihuenyo dị na abụghị nke elu-ezuru mkpebi ime ka ọtụtụ nke Amazon ọrụ, processor bụghị ike zuru ezu na-agba ọsọ graphically kpụ ọkụ n'ọnụ egwuregwu na ọ lags na ọbụna dị mfe ihe aga-eme.
Nnukwu nsogbu na Fire HD 10 bụ na ọ bụ ọnụ ala. Ọ bụrụ na ọ bụ £ 100, ọtụtụ ndị adịghị emezi emezi nwere ike ịgbaghara, ma na £ 170 e nwere ọtụtụ sọọ mpi mbadamba na-enye mma ahụmahụ.
Uru: oké Amazon mwekota, ọbọhọ ole na ole tụlee enweghị agbasa, microSD kaadị oghere
Ọghọm: ala mkpebi ihuenyo, ngwa ngwa processor, laggy arụmọrụ, na-adịghị ike Wi-Fi, bụghị akpaka ìhè ukpụhọde, ogbenye ese foto, nnọọ ngwa ngwa Nchaji
Tesco Hudl 2 nyochaa: a otutu mbadamba maka ego
Amazon Fire HD Kids Edition mbadamba nyochaa
Amazon.com, Android, Nkeji edemede, Ngwa, Kindle Fire, Nyocha, Samuel Gibbs, mbadamba kọmputa, Technology
← Olee otú ichiniike Mars Ise Mars nchoputa na gbanwee nghọta anyị nke red planet →